Sirta Ka Dambaysa Guulaha N'Golo Kante Oo La Ogaaday - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaSirta Ka Dambaysa Guulaha N’Golo Kante Oo La Ogaaday
Sirta Ka Dambaysa Guulaha N’Golo Kante Oo La Ogaaday
June 27, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta 0
N’Golo Kante waxay ciyaartiisu sii fiicnaanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa, waxaanu ku jiraa tartameyaasha halista ah ee abaal-marinta xiddiga adduunka ee dhamaadka sannadkan la bixin doono.
Laacibka reer France ayaa tiir-dhexaad iyo sababa ugu ahaa Chelsea inay ku guuleysato tartanka Champions League xilli ciyaareedkii tegay iyadoo uu bandhig cajiib ah muujiyey labadii kulan ee semi-finalka ee Real Marid iyo ciyaartii ugu dambaysay ee finalka oo uu intaba qaatay abaal-marinta xiddigii garoonka.
Khubaro badan ayaa tibaaxaya in Ballon d’Or-ka uu sannadkan qaadan doono N’Golo Kante oo uu soo afjarayo sannado badan oo ay iska beddelayeen Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, balse sannadkii 2018 uu dhexda u galay Luka Modric.
N’Golo Kante ayaa la tilmaamayaa inuu noqonayo midka abaal-marinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or kasoo wareejinaya Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ee usii gudbinaya Kylian Mbappe iyo Erling Haaland.
Sannadkii hore ee 2020 ayaa abaal-marintan la kansalay sabab la xidhiidha Korona Fayras, sidaas darteed ayuu Lionel Messi yahay ciyaartoyga haysta maadaama aanay cidina uga dambaynin.
Su’aalo badan ayaa laga keenaa sirta ka dambaysa guulaha N’Golo Kante ee daal la’aanta, kubadda uu mar walb taagan yahay halka ay marayso iyo orodka aan joogsiga lahayn.
Gregory Dupont oo ahaa tababarihii dhinaca jidh-dhiska Real Madrid ee waqtigii Zinedine Zidane ayaa su’aashan ka jawaabay, waxaanu sharraxay waxyaabaha caawiyey Kante.
“Tartamada aadka u adag, isaga [Kante] ayaa ah laacibka ugu bandhigga wanaagsan.” Ayuu Gregory Dupont ku bilaabay.
Isaga oo sii sharraxaya waxa uu yidhi: “Wuxuu awood u leeyahay inuu ku celiyo dedaalladiisa iyo soo kabashadiisa si aanu qof kale samayn karin, ha noqoto ciyaar socota dhexdeeda ama laba kulan oo kala duwanb e.
“Wuxuu leeyahay xaalado dabiici ah [abuur dabiici ah], laakiin waxa kale oo caawisa qaabka uu u nool yahay. Wuxuu aad uga taxadaraa cuntada iyo fuuq-baxa, in badanna wuu seexdaa.”
Hadalka Gregory Dupont wax badan ayaa ka jira, sababtoo ah, waxa hore loo ogaaday in N’Golo Kante aanu waligii hurdada ka habsaamin, soo-jeedna hadalkiiba daa. Ugu dambayn waxa uu seexdaa 23:30pm oo ah waqti laga yaabo in ciyaartoyda kale waxyaabo kale ku mashquulsan yihiin.